नारायण अधिकारी आइतबार, माघ २५, २०७७, २०:४०
काठमाडौं- बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट हत्या घटनाको अनुसन्धान प्रगतिउन्मुख भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबारदेखि अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले अनुसन्धानका पाटा साँघुरिदै गएको जनाएको छ।
घटनास्थलबाट किशोरी भट्टको मोबाइल भेटिनुलाई प्रहरीले धेरै ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। मोबाइलबाट अभियुक्तसम्म जोडिनसक्ने संकेत फेला पर्न सक्ने प्रहरीको विश्वास छ। यसको प्राविधिक पाटोबारेमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले जनाएको छ। सिआइबीका डिआइजी सहकुल थापाले अनुसन्धानमा जिल्लाको टोलीलाई सिआइबीको टोलीले टेक्निकल पाटोमा सहयोग गरिरहेको बताएका छन्।
सिआइबीमार्फत् टेक्निकल पाटो केलाइएको छ भने स्थानीय प्रहरीले पनि 'म्यानुअल्ली' घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रगतिबारे नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंहले भने, ‘अनुसन्धान प्रगतिउन्मुख छ। अहिलेसम्म लिडिङ प्वाइन्ट भने फेला पर्न सकेको छैन।’
अनुसन्धानको दायरा साँधुरो हुँदै गएपनि 'लिडिङ प्वाइन्ट' नभेटिएकाले अनुसन्धानले केही समय लिनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ।
शिक्षकदेखि किशोरीका साथीसम्म सोधपुछ
हत्या घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म उनीसँगै भएका साथीदेखि शिक्षकसम्म सोधपुछ गरेको छ। भट्टसँगै घर फर्कनेबेला सैलुनमा कपाल काट्न छिरेका भनिएका भागरथीका केटा साथी, उनी पढ्ने विद्यालयका शिक्षकसँग सोधपुछ गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंहले नेपाल लाइभलाई जानकारी लिए।
भागरथी बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न प्रचण्ड-माधवको मागशनिबार, माघ २४, २०७७
घटना भएको स्थानको बाटो ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्ति, विभिन्न केसमा यसअघि थुनामा परी छुटेका व्यक्ति, आपराधिक पृष्टभूमिका व्यक्ति, घटना भएको दिनदेखि त्यस ठाउँबाट हराएका छ/छैनन् जस्ता विषय अहिले प्रहरीले मिहिन ढंगले केलाइरहेको छ।
विद्यालयबाट निस्किएपछि भागरथीसँगै कसैको भेट भएको थियो कि थिएन? उनलाई अन्तिम पटक देख्नेमान्छे को हो? कहाँसम्म उनी सकुशल थिइन्? जस्ता विषय अहिले अनुसन्धानको घेरामा छन्।
‘परिचितबाटै हुन सक्छन् हत्या’
भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। कम्मरभन्दा मुनिका कपडा च्यातिनु र अर्धनग्न अवस्थामा शव फेला पर्नु, वरपरको झाडी मडारिनुजस्ता कारणले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको हुनसक्ने प्रहरी आशंका छ। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइनसकेकाले बलात्कार नै हो भन्ने पुष्टि भएको छैन। बलात्कारपछि हत्या भएको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको अवस्थामा भट्टको हत्यामा संलग्न व्यक्ति परिचित हुनसक्ने प्रहरी आँकलन छ।
भागरथी हत्यामा संलग्नलाई राज्यबाट संरक्षण नहोस् : विवेकशील साझाआइतबार, माघ २५, २०७७
लामो समयदेखि जघन्य अपराधको अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकृतले विश्लेषण सुनाए, ‘बलात्कारपछि हत्या भएको छ भने परिचित व्यक्तिबाटै हत्या भएको हुनसक्छ। परिचित व्यक्ति भएकैले बलात्कारको पोल खुल्ने डरले हत्याका घटना हुन्छन्। बलात्कारपछि हत्या जोडिएको घटनामा त्यो पाटोबाट अनुसन्धान हुन जरुरी छ।’
अनुसन्धानमा उच्च संवेदनशिलता
१७ वर्षीया किशोरी भट्टको शव भेटिएको जानकारी पाउनसाथ प्रहरी हाई सेन्सेटिभ (उच्च संवेदनशील) भएर खटिएको छ। शवका भेटिएको जानकारी पाउनासाथ स्थानीय प्रहरीले 'क्राइम सिन'लाई 'कर्डन' गर्ने काम गरेको थियो।
भागरथी हत्या घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही नगर्न कांग्रेस महिला विभागको चेतावनीआइतबार, माघ २५, २०७७
खोचलेक प्रहरी चौकीले 'क्राइन सिन'लाई सुरक्षित राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीलाई खबर गरेपछि जिल्लाका डिएसपीसहितको टोलीले घटनास्थलमा खटिएको थियो। बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल र डाक्टरसहितको टोली सुरुमै घटनास्थल पुगेर घटनास्थल अवलोकन गरेका थिए।
'क्राइम सिन' सुरक्षित राख्ने बेला प्रहरी लापरबाही भएको भन्दै विगतमा हुने गरेका आलोचनाबाट पाठ सिक्दै यो घटनामा प्रहरी उच्च संवेदनशील बन्दै अनुसन्धानमा खटिएको छ। ‘हामी सुरुदेखि नै हाई सेनसेटिभ भएर खटिएका छौं सिडिओसापदेखि, डाक्टर सरकारी वकिसम्मको टोलीले 'क्राइम सिन' अवलोकन गरेको छ’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंहले भने।
विशेषज्ञसहित 'क्राइम सिन'मा पुगेको टोलीले घटनास्थलबाट विभिन्न सबुद प्रमाण संकलन गरेको थियो। जुन प्रमाणबाट अभियुक्तसम्म पुग्न सकिने प्रहरीले विश्वास लिएको छ।
भागरथी हत्या घटना : मोबाइलबाट खुल्ला त अपराधको गुत्थी?शनिबार, माघ २४, २०७७
गत बुधबार दोगडाकेदार-३ स्थित सनातन धर्म मावि खोचलेक गएकी भट्ट घर फर्किनन्। बिहीबार उनको शव लवलेक जंगलस्थित खोचलेक–गिरेगडा सडकबाट करिब ३० मिटर तल वनमारा झाडीमा भेटिएको थियो। कपडा च्यातिएको अवस्थामा, शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट र निलडाम, रगत टाटाहरु लागेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो।
विद्यार्थीले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बिभत्स हत्या भएपछि बलात्कारपछि हत्या भएको हुनसक्ने आशंकासहित अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी अहिलेसम्म हत्यारासम्म पुग्न सकेको छैन। उता भट्टाका आफन्तले हत्यारालाई पक्राउ नगरेसम्म आफूहरूले शव नबुझ्ने बताएका छन्।
विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दलहरूले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको जस्तो घटना नहोस् भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। २०७५ साउन १० गते साथीको घर पढ्न जान्छु भनेर गएकी पन्त भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन्। उनको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन।
भागरथीको हत्यारालाई कारबाही गर्न नेविसंघको माग आइतबार, माघ २५, २०७७